ဝါးခယ်မ : ကြယ်ကြွေည ရဲ. လရိပ်အောက်က ချစ်တိုင်းမညားတဲ. သီချင်းတစ်ပုဒ်
ကြယ်ကြွေည ရဲ. လရိပ်အောက်က ချစ်တိုင်းမညားတဲ. သီချင်းတစ်ပုဒ်
ဒီနေ. ၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ.
ကိုယ်ကတော. ထုံးစံအတိုင်း ဒီလိုနေ. ဒီလိုအချိန်ဆို မအူပင် နည်းပညာ ဆရာကန်တော.ပွဲထဲ ရောက်နေရတာပါပဲလေ ။တကယ်တော. ကိုယ်.အတွက် ဒီ ၂၀၁၆ ဆိုတာ သာမာန်ထက် စိတ်ခံစားမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြုံ ရတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါ ။ နဂိုတည်းက ထိလွယ် ရှလွယ်ရှိတာရယ် ၊ အဆိုးကိုသာအရင်တွေးမိတတ်တာရယ် ၊ လိုချင်တာလေးတွေရနေရင်တောင် ဘယ်တော.ဆုံးရှုံးရတော.မှာလဲဆိုတာမျိုး တွေးပူတတ်တာရယ် အားလုံးပေါင်းလိုက်တော. ပျော်ရတာထက် ကျန်တာတွေက ပိုများနေတတ်တာကိုက ကိုယ်.ရဲ.ပင်ကိုစတိုင်လိုဖြစ်နေတာပဲလေ ။
ဒီနှစ် မအူပင်ကျောင်းက ငွေရတုဆိုတော. သာမာန်ထက်ပိုတဲ့အခမ်းအနား အစီအစဉ် နဲ.အပြင်အဆင်တွေ လုပ်ထားကြတယ်လေ ။ ကိုယ်ကတော. အရင်နှစ်တွေလောက် ထဲထဲဝင်ဝင် လုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးကွ ။ကိုယ်.အခြေအနေကိုကိုယ်သိလို. တာဝန်တွေကနေရှောင်လွှဲနေခဲ့တာကိုလည်း အားလုံးကနားလည်ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါတောင်မလွှဲမရှောင်သာ တာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာ လိုအပ်မှု ၊ လစ်ဟာချက်တွေရှိခဲ့တာမို. အားလုံးဝိုင်းကူဖြည်.ပေးခဲ့ကြရသေးတယ် ။ မယူချင်လို.မဟုတ်ပဲ ယူနိုင်စွမ်းမရှိတာကိုသိလို. ကိုယ်တာဝန်မယူခဲ့တာပါ ။ တကယ်လုပ်နေရသူတွေ တကယ်ကိုပင်ပန်းရတဲ့ပွဲဖြစ်သလို ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်တကယ်လုပ်ကြရသူချင်း ပွတ်တိုက်မှုလေးတွေလည်း ရှိတတ်ပြီး ဒါဟာတစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက် မကျေနပ်လို. ဖြစ်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ပွဲတစ်ခုပိုပြီး စနစ်ကျအောင် ၊ ပိုပြီးစည်ကားအောင် တွေးတောစီစဉ်ရင်း ဖြစ်ရတာမို. ပြသာနာ လို.မမြင်ကြပဲ ပစ္စတင်တွေရုန်းလို.အင်ဂျင်လည်ရသလိုမျိုး ပွတ်တိုက်မှုကရတဲ့ စွမ်းအင်နဲ. အလုပ်ပိုမိုပြီးမြောက်တယ်လို.ပဲ သဘောထားခဲ့ကြတာပါ ။ ဒါဟာ မအူပင် ကျောင်းဆင်းတွေရဲ. စိတ်ဓါတ်အစစ်ပဲလေ ။
မနက်တုန်းက ငွေရတုပွဲ အထိမ်းအမှတ်မုခ်ဦး ဖွင်.ပွဲ မှာ ကျောင်းတက်နေဆဲ မျိုးဆက်သစ် မိန်းကလေးငယ်လေးတွေက ဖဲကြိုးကိုင် အကူအညီပေးခဲ့ကြတယ်လေ ။ မျိုးဆက်သစ်နဲ. မျိုးဆက်ဟောင်းတို.ရဲ. ပေါင်းကူး အမြဲချောမွေ.နေဖို. ကိုယ်တို.ကျောင်းကလူတွေ ကအမြဲကြိုးစားနေခဲ့ကြတာပါ ။ ဒါကြောင်.လည်း ဘယ်ကျောင်းမှ ဆရာကန်တော.ပွဲကို GTI , GTC , TU ပေါင်းလုပ်ဖို.စိတ်မကူးခင်တည်းက ကိုယ်တို.ကျောင်းက ပေါင်းစည်းပြီးလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်နေပြီလေ ။ ပြောချင်တာက မနက်ကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုမြင်တော.လည်း ကောင်မလေးကို ပိုသတိရနေမိပြန်ရော ။ ဘာဆိုင်လို.လည်းလို.တော. မပြောနဲ. ။ ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် သတိက ရရနေတတ်တာပဲလေ ။
ပြီးတာနဲ. ဆရာကန်တော.ပွဲ စရော
ဒီနှစ်တော. ဆရာတွေအားလုံးကလည်း နေပူထဲ ထိုင်ကန်တော.တဲ့ကျောင်းသားတွေကို သနားလို.ထင်ပါရဲ. ။ သြ၀ါဒ နဲ.ပီတိစကားကို လိုရင်းလောက်သာပြောသွားကြတယ် ။ ဒီနှစ်က အမှတ်တရ အနေနဲ. ၂၅နှစ်ပြည်.သွားရှာပေမယ်. အကောင်အထည်အနေနဲ. မရှိရှာတော.တဲ့ အမည်ခံ GTI ကျောင်း ၀င်းထဲမှာလုပ်ရတာမို. ဆရာ/ဆရာမ တွေအတွက်ပဲ စင်မြင်./အကာဆိုတာတွေစီစဉ်ထားပြီးကျောင်းသား/သူတွေကတော. မြေပြင်မှာ စီစဉ်ထားတဲ့အခင်းနေရာကပဲ ကြည်နူး/ကျေနပ်စိတ်အပြည်. ၊ ဂါရ၀တရာအပြည်. ကန်တော.ကြရတာလေ ။ အားလုံးကတော.ပျော်ပျော်ပါးပါး ရိုရိုသေသေနဲ.ကို နေပူထဲကနေ ကန်တော.ကြတာပါပဲ ။ ၁၀ နာရီ နဲ. ၁၁နာရီကြား နေဆိုတော. တအားတော.မပူလှပေမယ်. ကြာတော.လည်း နည်းနည်းတော.ထိတာပေါ. ။ ဒါပေမယ်. တစ်ခုကောင်းသွားတာက ၉၃-၉၅ မေဂျာစုံ က ကျောင်းသူ/သားဟောင်းတွေက ငွေရတု အမှတ်တရ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေးတွေဝေတာမို. အားလုံးအဆင်ပြေသွားကြတာပေါ. ။ အားလုံးရဲ.ခေါင်းထက်မှာ အဲ့ဒီမျက်နှာသုတ်ပ၀ါလေးတွေကနေရာယူထားတာမို. Yellow Journalism တွေနဲ.တွေ.ရင်တော. သဲကန္တာရထဲက IS ညီလာခံ လိုလို ဘာလိုလိုဖြစ်သွားပေမပေါ.ကွယ် ။အဲ့ဒီအလှုစီစဉ်သူအားလုံးလည်း ဘ၀မှာအေးရိပ်ချမ်းသာရကြမှာပါ ။
ဘာဖြစ်လို.လည်းသိလား ။ ကျောင်းသားဟောင်းအသင်း တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုး ကိုဇော်လင်း ( 1994-96 EC ) လေ သိလားသူကလူပျိုကြီးပေါ. ။ သူနဲ.ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးတွေစုပြီး ငွေရတု အမှတ်တရ ကံကော်ပင်စိုက်နေကြတယ် ။ ဒီအစီအစဉ်ကတော. နောက်ပေါက်ကျောင်းတွေရဲ.သင်္ကေတ မလေးရှားပိတောက်တန်း သာရှိတဲ့တစ်ခါတုန်းက ကိုယ်တို.ရဲ.ကျောင်းကို ဒီငွေရတုနောက်ပိုင်း ကာလတစ်ခုမှာ ကံ.ကော်တောလေးများဖြစ်လေမလားဆိုတာရယ် ၊ ဘာအမည်တပ်ရမှန်းမသိတော.တဲ့ကျောင်းမို. ဘယ်နားသွားပြီး အထိမ်းအမှတ်ကဗ္မည်းလည်း ထိုးရမှန်းလည်းမသိ ၊ သစ်ပင်သာစိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတွေးရယ်ကြောင်. ငွေရတုအထိမ်းအမှတ် ကံ.ကော်ပင် ၂၅ ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းရဲ. အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ. ။
ပထမဆုံးအပင်ကိုတော. ကျောင်းအ၀င်ဝမှာ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဟောင်း ဒေါ်မြကြည်ကစပြီး
စိုက်ပေးတယ်ကွ ။ နောက်တော. အခြားဆရာ/ဆရာမတွေ ။ ပြီးတော.ပွဲကိုတက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဂျီတီအိုင်ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေ ၊ မအူပင်နည်းပညာကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ.ယူနစ်တာဝန်ခံအဖွဲ.တွေ ၊ ခုပွဲကိုလာရောက်ကူညီကြတဲ့ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသား/သူ တွေ စုပေါင်းစိုက်ပျိုးကြတာပေါ.ကွယ် ။ကိုဇော်လင်းကလည်း သစ်ပင်စိုက်ရင်း တစ်ပြုံးပြုံး နဲ.ပေါ.ကွယ် အားလုံးဝိုင်းစီစဉ်ကြရတဲ့ ပွဲအစီအစဉ်အချို.အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်လို.ပဲလား ၊ မိန်းကလေးတွေကြားထဲမှာသူတစ်ယောက်တည်းဝင်စိုက်ခွင်.ရနေလို.လား ၊ ဘာကြောင်.လဲတော.သူ.ဘာသာသိမှာပေါ.ကွယ် ။ဘာပဲပြောပြော ဒါဟာကျောင်းအတွက်ကော ၊သူတို.အတွက်ပါ အမှတ်တရ သစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်သွားမှာပေါ. ။
အဲ့ဒါပြီးတော. မေဂျာစုံ ကျောင်းသူ/သားဟောင်းတွေရဲ. စတုဒီသာအလှုပေါ. ။ ကောင်မလေးမကြိုက်ပဲ ကိုယ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းလိုမျိုးပါသလို ကိုယ်ရော ကောင်မလေးပါ နှစ်ယောက်လုံးရဲ. အသည်းစွဲ လဘက်ထမင်းလည်းပါတယ်ကွ ။ လဘက်ထမင်းကအများကြီး ရှိနေပေမယ်. ထည်.စရာ မရှိလို.ဆိုပြီး မြင်သာမြင် မကြင်ရဖြစ်နေသူတွေက အဲ့ဒီလဘက်ထမင်း မဏ္ဍပ်နားမှာ တ၀ဲလည်လည်နဲ.ပေါ.ကွယ်။ကျောင်းသူ/သားဟောင်းတွေအားလုံး ဟိုတုန်းကကျောင်းသားဘ၀လိုပဲ တိုးကြ ၊ ဝှေ.ကြ ၊တောင်းကြ နဲ.တကယ်.ကိုပျော်စရာပါပဲကွယ် ။
အဲ့ဒီမှာ ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ယောက်တွေ.လိုက်ရတယ်ကွ ။သူက ရာသက်ပန် သတ်သတ်လွတ်စားပြီး ဆေး/ဆေးလိပ်/အရက်/ကွမ်း/ဘာညာ အားလုံးရှောင်တဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းအသင်းရဲ.စည်းရုံးရေးမှုး ကိုဂျပိုးလေ ။ သူ.ခမျာ သတ်သတ်လွတ်လဘက်ထမင်းစားဖို.လုံးပမ်းနေရင်း နောက်ဆုံးတော. ထည်.စရာလည်းမရှိတာနဲ. ရတာပဲစားတော.မယ် ( နေအုံး မှားသွားလို.) ရတာပဲ စိတ်ပြေလက်ပျောက် လုပ်နေတော.မယ်ဆိုပြီး Lady တွေနဲ.ပဲ စုပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်လို. အဆာဖြေနေရှာတယ်ကွယ် ။ သူ.ကိုကြည်.ပြီးကိုယ်လည်း သနားနေမိတယ် ။ ဘာလို.လည်း ဆိုတော.သူနဲ.ခုန ကိုဇော်လင်းနဲ. နှစ်ယောက်ထင်တယ် ။ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးရင်း တစ်ခါတစ်ခါကျ ရင်တဲ့ ကိုယ်.ကိုကိုယ် ဒီဘ၀ မိန်းမမှ ရပါတော.မလားတွေးမိရင် ညဘက်ညဘက် အိပ်တောင်မပျော်ဘူးတဲ့ ။ အဲ့ဒါသူတို.နှစ်ယောက် ဘယ်သူပြောတာလဲတော. မသိပါဘူးကွယ် ။ အော် ဒါလေးတစ်ခုတော.မှာထားမယ်ကွယ် ။ဒါတွေက Personal တွေဆိုတော. လူတောထဲတော.လျှောက်မပြောမိပါစေနဲ. ။ လူပျိုကြီးတွေဆိုတော. အသက်ကြီးလေ ပျက်စီးလေ ( အဲမဟုတ်သေးဘူး ) အသက်ကြီးလေ အရှက်ကြီးလေတွေမို.ကွယ် .။တော်ကြာကိုယ်.ကို စိတ်ဆိုးနေအုံးမယ် ။
ဒီတစ်ခါတော. အခုနကတွေထက် ပိုသတိရမိပြန်ရော
အချို.တွေက မိသားစုလိုက် ဒီဆရာကန်တော.ပွဲကို လာကြတာလေ
ကလေးတွေက အဆောင်ရှေ.ကမြက်ခင်းပြင်မှာ ဆော.လို. ။ သူတို.တွေကသူငယ်ချင်းတွေနဲ. စကားတွေပြောလို. ။ သေချာတာက ကိုယ်.အတွက်တော. ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး၊ ဒီလို အခြေအနေမျိုး နဲ. ဒီဘ၀မှာတော. ဘယ်လိုမှကြုံနိုင်စရာ မရှိတော.ဘူးလေ ။ ဒါကြောင်. ကိုယ်.ဘာသာ ဟိုးးးးး Workshop တွေဘက်မှာပဲ တစ်ယောက်တည်းသွားထိုင်နေမိတယ် ။ လူတွေကြားထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းသပ်သပ်ဖြစ်နေရတာပေါ. ။ ဒါနဲ.ပဲကိုယ်လည်း ထုံးစံအတိုင်း ကောင်မလေးဆီ Message ပို.နေမိတယ် ။ ကောင်မလေးရေ …. ကိုယ်နာမည်ပေးခဲ့ဖူးသလို ပဲ Mind Reader ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ.လိုက်အောင်ပဲ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်.ဆီဖုန်းလှမ်းခေါ်လာပေးတယ် ။ Video Phone နဲ.လေ ။ ပျင်းနေမှာစိုးလို. မျက်နှာကြည်.ပြီး ပြောလို.ရအောင်လေတဲ. ။ ကဲ ဘယ်လောက် ကိုယ်.စိတ်ကိုနားလည်လိုက်သလဲ ၊ ဘယ်လောက်တစ်ဖက်သားအပေါ် ဂရုစိုက်ညှာတာတတ်သလဲ ။ ဒါကြောင်.လဲ ထာဝရ အတွက်မဟုတ်ပဲ အချိန်အပိုင်းအခြားလေးတစ်ခုအထိ ပဲဆိုတာသိရက်နဲ. ၊ ကောင်မလေးရဲ. ဖြူစင်တဲ့ညှာတာမှုတွေအတွက် ကိုယ်.အနာဂတ်တွေ အပါအ၀င် ကိုယ်.ဘ၀တစ်ခုလုံးနဲ.ပါ လဲပြီး ပျော်ပျော်ကြီး နစ်မြုပ်နေခဲ့တာပေါ.ကွယ် ။
နောက်တော. ကျောင်းထဲက အဖွဲ.တွေ ဗျစ်ရည်ဆိုင်ဆီ ချီတက်သူချီတက်
ကျောင်းထဲက ယစ်ရွှေရည် ရတဲ့ ( ပွဲအတွက် သီးခြားစီစဉ်ထားတာပါ ) ဆိုင်လေးမှာ ထိုင်သူတွေထိုင်
ကန်တော.ခံ ဆရာ/ဆရာမတွေ ဧည်.သည်တွေ အတွက် စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ထောပတ်ထမင်း စားသူတွေက စားနဲ. သူ.ဘာသာ သီးခြားစီလည်ပတ်နေကြပြီးတဲ့နောက်တော. ကောက်ကာငင်ကာ ဖွဲ.စည်း၊ ၂နာရီတိတိ လေ.ကျင်.ပြီး u 16 မြန်မာအမျိုးသမီး လက်ရွေးစင်ကို ၁-၁ နဲ.ခြေရည်တူ ( ခြေအရည်အတွက် ၂၂ ချောင်းချင်းတူတာ ) ကစားခဲ့တဲ့ ကိုယ်တို.ရဲ. U 40 ကျောင်းသားဟောင်းဘောလုံးအသင်း နဲ. မအူပင်လက်ရွေးစင်အသင်းတို.ရဲ. ကျေးဇူးဆပ်ပွဲဆီ သွားကြတယ်လေ
ကျောင်းတက်တည်းက ဘောသမားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းအသင်းဥက္ကဋ္ဌ က မအူပင်မြို.ဆိုတာလည်း ကိုယ်တို.တွေအပေါ် တစ်နည်းတစ်ဖုံ ကျေးဇူးရှိတာမို. ကျေးဇူးကြွေးကို ဂိုးဖြင်.ဆပ်မည် ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ. ဒီပွဲကို စီစဉ်ခဲ့တာလေ ။ ဒါပေမယ်. ဥက္ကဋ္ဌစိတ်ထဲအားရအောင်မဖြစ်ခဲ့ရှာပါဘူး ။ ကိုယ်တို.တွေ ၃ ဂိုးပဲ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ခဲ့တယ် ။ဒါတောင်ကိုယ်တို.ဘောလုံးအသင်းထဲက ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါနေတာမို. သူက တစ်ဂိုးပြန်သွင်းပလိုက်တယ်လေ ။ ဥက္ကဋ္ဌ ခမျာ မျက်နှာကို မည်းသွားတာပဲ ။ မဟုတ်သေးဘူး သူကနဂိုတည်းကမည်းတာဆိုတော. မှောင်သွားတယ်ပြောရမှာပေါ ။ ဟုတ်ပါတယ်လေ ။သူ.အလှု ကို ကဖျက်ယဖက်လုပ်တာကိုး ။
ဒီလိုနဲ.ပဲ ရေမိုးချိုး ၊ အ၀တ်အစားလဲကြပြီးတဲ့နောက် မိတ်ဆုံညစာစားပွဲ ၊ ဂီတဖျော်ဖြမှု နဲ.ကျောင်းသားဟောင်းတို.ရဲ. နားဝင်ပီယံသူ.ပါးစပ်သံတွေ တင်ဆက်မယ်.ကျောင်းဝင်းထဲကို အားလုံးပြန်စုကြတာပေါ.ကွယ် ။ မူလအစီအစဉ်က ၆နာရီမှာ Dinner စမယ် ၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ ဂျေမောင်မောင် ၊ ဂျေညီညီ ၊ ဂျေညီမလေး ၊ နန္ဒဧရာ ၊ ကိုလင်း နဲ. တက်သစ်စအမျိုးသမီးအဆိုရှင် ၃ယောက်လောက်က ၈နာရီအထိဖျော်ဖြေမယ် ။ ပြီးရင် ဆရာပန်တျာဦးသာစိန် နဲ. သန်.ဟန်ဇာဇော်မိုး တို.ရဲ. အငြိမ်.ခွင်လေး ၁၅မိနစ်လောက်ကမယ် ။ ပြီးတာနဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတို. နွဲကြမယ် ပေါ ။ ဒါပေမယ်.၆နာရီ ခွဲလောက်မှ Player တွေ အသံညှိုတဲ့အလုပ်ကို စလုပ်နိုင်ကြတယ်ကွယ် ။ ဒါပေမယ်. အောက်မှာ လူ၄၀၀စာစီစဉ်ထားတဲ့စားပွဲဝိုင်းတွေကတော. လူတွေပြည်.နှင်.နေပြီလေ ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုချီးကျုးဖို.ကောင်းတာကတော. နားလည်မှုအပြည်.ရှိတဲ့ ၊ ဆင်ခြင်တုံတရားလက်ကိုင်ထားနိုင်ပြီး အရာရာကိုဖြည်.မြင်ပေးနိုင်တဲ့ တက်ရောက်သူကျောင်းသားဟောင်းတွေ ပါပဲ ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မအူပင်မှာ ကျင်းပတဲ့ ဆရာကန်တော.ပွဲရဲ. ညစာစားပွဲအခမ်းအနားမှာ လူ ၂၀၀ ပြည်.အောင်တောင်မတက်ခဲ့တာမို.ဒီနှစ် လူ၄၀၀ စာပဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ၅၀၀ ကျော် ၆၀၀လောက်ရောက်လာတော. အစစအရာရာ လိုအပ်ချက်တွေ ဖြစ်ကုန်တော.တာပေါ.ကွယ် ။ စားဖို.ဝေးလို.အချို.ထိုင်ဖို.တောင်အဆင်မပြေခဲ့ပေမယ်. ဘယ်သူမှဒါကိုပြသာနာ တစ်ရပ်လို.မမြင်ခဲ့သလို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ ကူညီဖြေရှင်းပေးခွင်.ရတဲ့ကိစ္စလို.သဘောထားတာကိုက ဘယ်လောက်မအူပင်နည်းပညာကျောင်းသားဟောင်းတွေ ပီသလိုက်ကြသလဲ ။ ကောင်မလေးရေ ကိုယ်တို.ရဲ. အဲ့ဒီလို အသိုက်အ၀န်းမျိုးနဲ. ထိတွေ.နီးစပ်အောင် စီစဉ်မပေးနိုင်ခဲ့လို. စိတ်တော.မကောင်းပါဘူး ။
ဒီလိုနဲ.ပဲ ၇နာ၇ီလောက်မှာတော. ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်တွေ စရော ဆိုပါတော.
တီးတဲ့ထဲမယ် ကျောင်းသားဟောင်းအချို.ပါနေပေမယ်. Pro လက်တမ်း ကို မှီအောင်လိုက်နိုင်သလို သီဆိုသူတွေက ၀ါရင်.သီဆိုသူတွေ ၊ Stage နဲ. Lighting ပိုင်းကလည်း တော်ရုံတန်ရုံ နယ် Stage Show မှာတောင်မသုံးနိုင်တဲ့အပြင်အဆင်တွေ ၊ရိုက်ကူးရေးပိုင်းမှာလည်း Drone ကအစသုံးထားတာဆိုတော. အစစလိုလေသေးမရှိပါပဲ ။ ဒါပေမယ်. ကိုယ်.ရင်ကို ပထမဆုံးစထိတဲ့သိချင်းကတော. နန္ဒဧရာဆိုတဲ့ ကြယ်ကြွေညတောင်းဆုတောင်းမယ် ဆိုတဲ့သီချင်းပေါ.
မျောလွင်.သွားတဲ့ လရောင်တန်းရဲ. တစ်ဒေသကို
အာရုံဖြန်.လို. စိတ်တွေရွက်လွှင်. လိုက်ရှာနေရင်း
ကြယ်တွေကြားမှာ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ. လှတဲ့မင်းကို မျှော်လင်.မထားပဲ တွေ.လိုက်တယ်
နေမျိုးဆေး က ကိုယ်အဖြစ်ကိုများရေးထားသလားထင်ရတယ်ကွယ်
တကယ်ကိုကိုယ်တို.ဆုံခဲ့ကြတာက များစွာနောက်ကျသော အမှတ်မထင်တွေ.ဆုံမှုလေ
မှတ်မိပါသေးရဲ. အဲ့ဒီနေ.ကလည်း ၁၂ရက်နေ.ပါပဲကွယ်
နူးညံ.တိမ်ယံ ထာဝရအလင်းနဲ. ကြယ်စင်မှုန်းတဲ့.
မျှော်ရည်မှန်း ရင်ခွင်လမ်းက ငုံစင်ပန်းမို.
ပန်လိုစိတ်သာ ရင်မှာပြည်.နှက် ဆက်သလိုက်တယ်
ကောင်မလေးရေ ကိုယ်ကတော. ဆက်သခွင်.တောင်မရခဲ့ဘူးကွ
စွဲငြိကာရံ သာယာခြင်းရဲ. ရင်ခုန်စည်းချက် ရစ်ခြုံလွှမ်းမဲ့ သခင်မထံ
သံစဉ်ဖွဲ.လို. ညှို.ငင်လွမ်းချင်း ဆွေးသီနေရင်း
ဒီသီချင်းစတဲ့အချိန်မှာပဲ ကောင်မလေးဆီကို ကောင်းကင်ပုံလေးရိုက်ပြီး ဒီသီချင်းလေး ဆိုနေပြီလို.လှမ်းပို.လိုက်သေးတယ် ။ ကောင်မလေးလည်းဒီသီချင်းကြိုက်တယ်လေ ။ ဒါပေမယ်. ကောင်မလေးဆီက Reply ပြန်မရခဲ့ဘူး ။
ရင်.ကျက်အိနြေ္ဒ ထည်ဝါခြင်းရဲ. ဂုဏ်သတင်းနဲ. မွှေးထုံသင်းတဲ့ အချစ်ဆုံးထံ
အသည်းနဲ.ရင်းလို. ဦးကိုညွတ်လျှက် အလွမ်းလွှင်.တင်ရင်း
ဆုံနိုင်ဖို.ကို ရင်မှာမှန်းဆ တမ်းတရင်းနဲ.
အပြင်မှာ သီချင်းလေး ဆုံးသွားပေမယ်. ရင်ထဲမှာ ဒီစကားလုံးတွေက ပဲ.တင်ထပ်နေဆဲပဲကွယ်
ပြီးတော.အငြိမ်.ခန်းအလှည်.ပေါ.။ သူတို.တွေအနေနဲ.လည်း အများသဘောကျတဲ့အထိဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ်. ၉နာရိလောက်မှာစရမယ်.ကျောင်းသားဟောင်းတွေရဲ. အစီအစဉ်တွေကတော. ၁၀နာရီဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီလေ ။ ရန်ကုန်ပြန်မယ်.လူတွေတောင် ကားပေါ်ခေါ်တင်နေပြီ ဒီမှာက ကြိုးညှိုတုန်း အသံစမ်းတုန်းရှိသေး ။ တစ်မျိုးတော.လည်းကောင်းတာပေါ.လေ ။ လူအများကြီးထက်စာရင် လူနည်းနည်းနဲ.ဆိုတော.သီဆိုသူတွေ အနေနဲ.ပရိသတ်ကို သိပ်မရှိန်ရတော.ဘူးပေါ.။ ဒါတောင်ရပ်ကွက်ထဲက လာကြည်.တဲ့သူတွေကျန်နေသေးလို. ပွဲက ကြည်.ပျော်ရှုပျော် ရှိနေသေးတာ ။ ဒီလိုနဲ.ပဲ ကိုယ်ဆိုရမယ်.အလှည်.ရောက်ရောပေါ. ။ကိုယ်မဆိုခင် ကိုယ်တို.ကျောင်းရဲ. နာမည်ကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုဂျပန်ကြီး ဆိုသေးတယ်လေ ။သူကသီချင်းလည်းဆိုချင် ၊ တရားလည်းဟောချင် ၊ ပြဇာတ်လည်း က ချင် တစ်ယောက်တည်းနဲ. အစုံတင်ဆက်ချင်သူမို. စောင်.တော.စောင်.လိုက်ရသေးတယ် ။
ကိုယ်တကယ်ဆိုချင်တာက ဖြိုးပြည်.စုံရဲ. လရိပ်လေး
ရေအိုင်ငယ်ထဲက လရိပ်လေးသာ တန်ဖိုးထားပါတယ်
အဲ့ဒီ သီချင်းကိုဆိုချင်ပေမယ်.လည်း စင်ပေါ်တက်ဆိုရလောက်အောင် ကိုယ်မပိုင်တဲ့သီချင်းဖြစ်နေတာရယ် ၊ တိုက်လည်းမထားတာရယ် ၊ ၊ ပြီးတော. ကိုယ်ကသိချင်းဆိုရင် အပြည်.ခံစားတတ်သူမို. သိချင်းဆုံးအောင်မဆိုနိုင်မှာရယ်ကြောင်. ကိုယ် Favorite အဆိုတော် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထူးအိမ်သင်ရဲ. ချစ်တိုင်းလည်းမညား ဆိုတဲ့ သိချင်းလေးပဲ ဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်ကွ ။ကိုယ်ဒီသိချင်းဆိုမယ်ဆိုတာကောင်မလေးကိုပြောထားပြီးသားလေ ။ ဒီမှာက ကိုယ်ဆိုနေတာကို တိုက်ရိုက်ရိုက်ပြီး ကောင်မလေး ကြည်.လို.ရအောင်ပို.နေဖို.ကလည်း Internet Speed က Viber ပြောဖို.တောင်အနိုင်နိုင် ။
အ၀င်အအစ ၊ Verse , Chorus အကုန်အဆင်ပြေပါတယ်
ကိုယ်.မျက်လုံးထဲမှာ ကောင်မလေးရဲ. မျက်လုံးကြည်ကြည်တောက်တောက်လေးတွေရယ် ၊ တအားလှအောင်ပြုံးတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေရယ် ၊ အပြစ်ကင်းလွန်းတဲ့မျက်နှာလေးရယ်ကို မြင်ယောင်ရင်း ဒီသီချင်းကို ဆိုနေခဲ့တာပါ
အဖော်မဲ့ နှုတ်ခမ်းများလည်း ညင်သာတီးတိုးရွတ်ဆိုဆဲ
အချစ်ရဲ.လိပ်ပြာလေး ဘယ်မှာ ပုန်းလို.နားပြီလဲ
အဖော်ကွဲတဲ့ ငှက်ကလေးများ အပေါ်ကိုသာ
ငေးငေးကြည်.ရင်းနဲ.သာ နှလုံးသားမျက်ရည်များ ကျဆင်းလာ
Solo ပြီးလို.နောက်တစ်ခေါက်ပြန်အကျော.မှာတော. သတိထားတဲ့ကြားက ကိုယ်လုံးလုံးကို နစ်မြောနေခဲ့ပြီလေ ။ Second Verse မှာကိုပဲ ဆက်ဆိုလို.မရအောင်ဖြစ်ပြီးစာသားအချို.ရောထွေးဆိုခဲ့ရတယ်
နောက်ဆုံး Ending မှာ ချစ်တိုင်းလည်းမညားဆိုတဲ့စာသားလေးကို Fade Out နဲ.သွားရမှာ ဆက်ဆိုလို.ကိုမရတော.လို. သီးခြားလုပ်နေစရာမလိုပဲ အလိုလို Fade Out Ending ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လေ ။
ဘ၀က ဘာလို.အဲ့လိုဖြစ်ရတာလည်း ။ စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ. အဆုံးသတ်က ဒါမျိုးလား ။ လောကမှာ စောတယ် /နောက်ကျတယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးက ချစ်ခြင်းရဲ.၀ိဥာဏ်ကို ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်လား ။ ကန်.သတ်ချက်တွေ / စံနှုံးတွေ ကို မေတ္တာတရားက မကျော်လွှားနိုင်ဘူးလား ။ လွမ်းဆွတ်မှု တို.ကြေကွဲခြင်းတို. ဆိုတာ ဘယ်သူဖန်ဆင်းခဲ့တာလဲ ။
ဘာကိုမှ မမျှော်လင်.ထားပါနဲ.ဆိုတဲ့စကားက အယူခံမဲ့ သေမိန်.ထက် အဆရာထောင်ပြင်းထန်ပါတယ်ကွယ်
စာနာမှု သက်သက်နဲ.ခွင်.ပြုနေတဲ့ နားလည်မှုတွေအတွက်လည်း ကျေးဇူးကုဋေကုဋာပါ
တကယ်တော. Hopeless ဆိုတဲ့ စကားဟာ အိမ်မက်ကစပြီး အနာဂတ်အပါအ၀င် ဘ၀တစ်ခုလုံးကို သေစေနိုင်တယ်ကွယ့် ။ ဒီ.အတွက်လည်း ကောင်မလေး ကိုယ်တိုင် မှန်/မမှန် ကြည်.ခွင်.ရချင်ရသွားမှာပါ ။ အဲ့ဒီတစ်ချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ရင်တော. ကျန်နေခဲ့ရတာထက် ထွက်ခွာသွားခွင်. အတွက်ပဲ ကိုယ်.ဘာသာ သတ္တိမွေးရမှာပေါ . ။ လောကထဲမှာဆိုရင်တော.ပြန်ဆုံခွင်.ရှိနေနိုင်သေးတာမို. သေချာပေါက်မဆုံနိုင်တဲ့နေရာအထိထွက်ခွာ
ကိုယ်စင်ပေါ်ကဆင်းလာတော. ကျောင်းသားဟောင်းအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ကတော်က ကိုယ်ဆိုတာကို ကောင်းလို.တဲ့ ။ ပြီးတော. အသင်း ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ ရဲ. အမျိုးသမီးကလည်း ကောင်းလိုက်တာ ၊ တိုက်ဆိုင်လို.လားတဲ့ ။ ကိုယ်ရီပြီးဟုတ်ကဲ့လို.ပဲပြောခဲ့ပါတယ် ။ တကယ်ကိုယ်ပြောခဲ့ချင်တာက ဟုတ်တယ်အမတို.ရေ ….. ဒီသိချင်းက ကျွန်တော် ဘ၀တစ်ခုလုံးနဲ.ရင်းပြီး ဆိုခဲ့ရတာလို.
နောက်တော. ကိုယ်တို.အဖွဲ.ထဲက ကိုစိုးမိုးကျော် နဲ.သူ.အမျိုးသမီးမသန္တာညွန်.တို.သီချင်းတစ်ပုဒ်တက်ဆိုတယ် ။ နောက်ထပ် တောင်းဆိုလို. English သိချင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ဆိုတယ် ။ ကောင်မလေးရေ ဘ၀မှာလေ အဲ့လိုလေးတစ်ကြိမ်လောက်လေးပါ ။
အဲ့လိုလေးတစ်ကြိမ်ပါပဲ ။ အဲ့အခွင်.အရေးမျိုးလေး ကိုတစ်ကယ်ကို တစ်ရှိုက်မက်မက် တမ်းတမိပါရဲ. ။ သူတို.၂ယောက်သိချင်းဆိုနေချိန်မှာလေ …………. သူတို.နှစ်ယောက်လုံးရဲ. စိတ်ကူး ၊ ရင်ခုန်သံ ၊ ၀ိဥာဏ် အားလုံးတစ်သားတည်းဖြစ်နေလိုက်တာကွယ် ။ ပြီးတော. ကိုစိုးမိုးကျော် Drum တက်တီးတော.သူ.အမျိုးသမီးက ဖုန်းနဲ.မှတ်တမ်းတင်နေလေရဲ.။
ကိုယ်ကျတော. ဘာလို. အဲ့အခွင်.အရေးမျိုး ရဖို.နေနေသာသာအိမ်မက်တောင်ထည်.မက်ခွင်.မရှိတာ ဘာလို.လည်း ။ ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင်.လား ၊ ကံကြမ္မာဆိုတာကြောင်.လား ။ဒါတွေက ဘယ်သူမှပြင်ဆင်လို.မရတော.ဘူးလား ၊ ဘယ်လိုမှပြင်ဆင်ခွင်.မရှိတော.တာလား
ဒါမှမဟုတ်ပေးဆပ်ခွင်.မှာတင် မတင်းတိမ်မရောင်.ရဲတတ်တဲ့ ကိုယ်.အပြစ်များဖြစ်နေမလားပဲ
နောက်ကိုယ်တို.အဖွဲ.ထဲကပဲ သက်ထွေးအောင်တို. ဇနီးမောင်နှံ တက်ဆိုဖို. Request လုပ်ကြတယ်
ကိုသက်ထွေးအောင်အမျိုးသမီးက သူအဆင်မပြေတာကြောင်.တစ်ယောက်တည်းဆိုခွင်.ပြုဖို. ပြန် Request လုပ်တာမို. ကိုသက်ထွေးအောင် တစ်ယောက်ပဲ တက်ဆိုရတာပေါ ။အဲ့ဒီမှာ သူ.အမျိုးသမီးက ပန်းကုံးတက်ချီးမြှင်.တယ်လေ ။ ပန်းကုံးချီးမြှင်.ပြီးချိန်မှာပဲ အားလုံးက အနမ်းနဲ.ဂုဏ်ပြုဖို. တောင်းဆိုကြတာနဲ. ဂုဏ်ယူမှုတွေ ၊ ကျေနပ်မှုတွေ နဲ.အတူ ရှက်ဟန်သဲ့သဲ့ပါတဲ့ အနမ်းနဲ.ဂုဏ်ပြုခဲ့တာကွယ်.။
ကိုယ်လေပန်းကုံးစွပ်နေတဲ့ပုံလေး အမှတ်တရ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ်.အဲ့ဒီပုံလေးကို ရိုက်ဖို.သတိမေ.နေခဲ့တယ် ။သတိမေ.နေခဲ့တယ်ဆိုတာထက် အဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုကြည်.ရင်း ကျေနပ်လိုက်တာ ။ပြီးတော. အားကျလိုက်တာ ။ အားကျခြင်းနဲ.တစ်ဆက်တည်း နာကျင်လိုက်တာ ကွယ်။ကိုယ်.အတွက် ဘယ်တော.မှ ဘယ်လိုမှ စိတ်ကူးတောင်ယဉ်ကြည့်ခွင်.မရှိတဲ့ အခြေအနေ ၊ ယောင်လို.တောင်မတွေးရမယ်. မြင်ကွင်းတွေလေ ။ အိမ်ထောင်ဖက် နှစ်ဦးလုံးက ဒီကျောင်းကဖြစ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ တစ်ဦးက ဒိကျောင်းကဖြစ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ယောက်လုံးစိတ်တူကိုယ်တူ ကူညီကြ ၊ အားဖြည်.ကြ ၊ ဖေးမကြ ၊ အကြံပေးကြနဲ. အဲ့ဒီကိုယ်တို.ရဲ.အ၀န်းအ၀ိုင်းထဲကို ကိုယ်.ကောင်မလေးက ဘယ်တော.မှရောက်လာနိုင်မှာမှမဟုတ်ပဲလေ ။
နောက်ဆုံးတော. ညသန်းခေါင်ယံအလွန် ၁နာရီမှာပဲ ကိုယ်တို.တွေအားလုံး အဲ့ဒီကိုယ်တို.ရဲ. တစ်ခါကသုခဘုံလေးဆီကနေ ၊ အဲ့ဒီမအူပင်မြို.ကြီးဆီကနေ ရန်ကုန်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်ကွယ်
ခုကတော.ထင်ထင်းကြီးကို မြင်နေရတာမို. ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ပုံရက်သားပစ်ချထားလိုက်ပြီကွယ်
အကယ်လို.များ နောင်နှစ်ဒီလိုညမျိုး ကိုယ်မပါနိုင်ခဲ့တော.ရင် သူတို.တွေကိုယ်.အကြောင်းကို တစ်ခွန်းတစ်လေများပြောမိကြမလား ။
အကယ်လို.များ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော.ကောင်မလေးအတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ သိချင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက် နောင်နှစ်ဆိုခွင်.ရချင်ပါသေးရဲ. ………………………………………
( ဓါတ်ပုံအချို.ယူငင်အသုံးပြုခွင်.ရစေခဲ့သော မူရင်း မှတ်တမ်းတင်သူအချို.အားအထူးကျေးဇူးပါ )
Posted by ကျောင်းတော်သားဟောင်း at 9:47 AM
ကြယ်ကြွေည ရဲ. လရိပ်အောက်က ချစ်တိုင်းမညားတဲ. သီချင်...
ရဲမိုး ပြောတဲ့ ၁၂ သန်း ပါတီ